Maxkamadda ugu sarraysa Kenya oo qaadatay go'aan aan horay uga dhicin Afrika - BBC Somali
Xasan Cabdullaahi Haybe Soosaare, BBC Soomaali
Waxaa aad looga dabaaldagay goobaha ay mucaaradku ku xoogbadan yihiin
Go'aankan ayaa ah taariikh cusub oo ay Kenya hoosta ka xariiqday ka dib markii ay noqotay dalkii u horreeyay ee Afrika ku yaalla ee waxba kama jiraan ka soo qaada doorasho madaxweyne.
Qodobbadii saldhigga u ahaa go'aanka maxkamadda
Madaxa xisbiga mucaaradka Kenya ee NASA, Raila Odinga shir jaraa'id qabtay go'aanka maxkamadda ka dib ayaa yiri "Xukunkan waa mid noociisu nagu wada cusub yahay, wuxuuna guul weyn u yahay dadka reer Kenya oo dhan, Annagu wax kalsooni ah kuma qabno guddiga doorashooyinka sida uu haatan u dhisan yahay, run ahaantiina intooda badan waxay ahayd inayba xabsiyada ku jiraan. Sidanna kuma daynayno dadkii dambiyadaas waaweyn ka galay dadka reer Kenya".
Madaxaweynaha Kenya oo khudbad ka jeediyay dadka Kenya ayaa sheegay "in uu ixtiraamayo go'aanka maxkamadda balse uusan ku qanacsanayn,"
Madaxweynaha oo ku khudbad ku jeediyay Af Ingiriis iyo Af Sawaaxili "ayaa dadka reer Kenya ugu baaqay in ay nabadda ku dadaalaan oo qofba qofka ku xiga uu gacanta qabsado,"
Wuxuu intaas ku daray "in dadka dariska ah ay daris sii ahaan doonaan, siyaasigay doonaanba ha taageersnaadaan ee", wuxuuna aad ugu celceliyay in nabadda lagu dadaalo.
Dhanka kalana Axmed-Naasir Cabdullaahi oo ah qareenkii matalayay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay "in go'anka maxkamaddu uu ahaa mid siyaasadaysan".
Image caption Gudoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati
Isla markii loogu dhawaaqay go'aanka maxkamadda, taageereyaasha mucaaradka ayaa damaashaad ka billaabay bannaanka maxkamadda, iyo deegaannada kale ee ay ku xoog badan yihiin.
Image caption Taageerayaasha mucaaradka oo Nairobi ku dabaaldagaya